Sunday February 02, 2020 - 21:39:00 in Wararka by
Kalimad uu jeediyay Sheekh Qaasim Al Riimi amiirka Al Qaacidda ee Jaziiradda Carabta ayuu ku sheegay in weerarkaas uu ka dambeeyay dagaalyahan mujaahid ah oo isku dhax qarinayay ciidamada dowladda Sacuudiga.
Al Qaacidda ayaa soo bandhigtay Farriimo khaas ah oo uu Max'med Bin Saciid Alshamraani kasoo diray saldhigga Pensacola ka hor intii uusan weerarka fulin, farriimaha ayuu geesigan ku sheegayaa ujeedka camaliyadda uu ufuliyay oo ah in uu u aargudo dadka ducafada muslimiinta ee dowladda Mareykanku ay ku gummaadayso caalamka islaamka.
Sheekh Qaasim Al Riimi ayaa bogaadiyay weerarkii uu fuliyay Al Shamraani oo ahaa mujaahid isku dhax qarinayay safka cadowga, cajallada Video-ga ah ee Al Qaacidda baahisay ayaa lagusoo gudbinayaa macluumaad ku saabsan qaabkii uu u dhacay weerarkan.
Al Qaacidda ayaa ugu baaqday qof walba oo muslim ah in uu beegsado danaha Mareykanka ee caalamka isagoo aan u aaba yeelayn mid hubaysan iyo mid aan hubaysneyn intaba.
Weerarkii ka dhacay saldhigga ciidanka badda Mareykanka Pensacola ee gobolka Florida ayaa gallaaftay nolosha sedax sarkaal iyo dhaawaca lix kale, Al Qaacidda ayaa sidaan oo kale weerar 9 askar American ah lagu dilay uga fulisay wadanka Mareykanka sanadii 2009.
Halkan ka degso Video-ga MP4